Wadan xero ku ootey qaxooti oo loo sheegay inuu ooda ka qaado - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wadan xero ku ootey qaxooti oo loo sheegay inuu ooda ka qaado
Maxkamada reer Yurub ayaa dalkaasi Hangari u shegtay inay si degdega ooda uga qado qaxooti uu xero ku ootey. Qaxootigaas ayaa dhinacna u dhaqaaqi karin maadaama xadka xero looga ooday.
”Waxa dalka Hangari ku hayso dadkaasi qaxootigaas waa sharci daro una dhiganta xeroyinkii lagu hayn dadka dagaalkii labaad ee Yurub ka qarxay ayaa lagu sheegay maxkamada. Waxa Hangari la siiyay afar usbuuc inay ku sii deyso dadkaasi.
Raiisal wasaaraha dalkaasu Hangari ayaa shegay in la xidhi doono xeradaas dadkana magaalooynka lagu sii deyn doono. ”Waa inaan u hogaansano go’aanka maxkamada Yurub maadaama aan ka mid nahay ayuu yiri.
Cabudhinta qaxootiga ayaa timi markii Seerbiya u diidey magangelyo laba nin oo u dhashay dalkaasi burburey ee Afgaanistaan iyo Iiraaniyiin Kurdiyiina dibna ugu celisay Hangari.
Lama oga in Soomaali ku jirto xeradaas xadka ku taala ee geri go’anka ah. Hadda laga bilaabo qofkii magangelyo rabo waa inuu iska dhiibaa safaaradaha aan ku leenahay caalamka ayuu raaciyay raiisaal wasaaraha cunsuriga ah.